လက်တွေ့အသုံးချလို့ရတဲ့ သွားတိုက်ဆေးရဲ့ အံ့မခန်းအကျိုးရှိပုံနဲ့ အသုံးဝင်မှုများ . . . - Thutasone
လက်တွေ့အသုံးချလို့ရတဲ့ သွားတိုက်ဆေးရဲ့ အံ့မခန်းအကျိုးရှိပုံနဲ့ အသုံးဝင်မှုများ . . .
လက်တွေ့အသုံးချလို့ရတဲ့ သွားတိုက်ဆေးရဲ့ အံ့မခန်းအကျိုးရှိပုံနဲ့ အသုံးဝင်မှုများ
သွားတိုက်ဆေးဟာ ရှူးဖိနပ်တွေမှာဖြစ်တတ်တဲ့ ပွန်းရာ၊ပွတ်မိတဲ့အရာတွေ ကို ပျောက်အောင်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
သွားတိုက်ဆေးအနည်းငယ်ကို သားရေ ရှူး(leather shoes)တွေမှာ နည်းနည်းညှစ်ထည့်ပြီး နူးညံ့တဲ့အဝတ်စနဲ့ ဖိနပ်ကို ပွတ်တိုက်ပေးပါက ခြစ်ရာ ပွန်းရာတွေပျောက်ပြီး အသစ်အတိုင်းဖြစ် သွားမှာပါ။(leather shoes)တွေကိုသာမက sneaker shoes တွေကို သန့်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
မီးပူတိုက်ရင်း အဝတ်နဲ့ ကပ်မိလို့ မီးပူမှာ ကျန်နေတဲ့ အမည်းစွန်းတွေကိုလည်း သွားတိုက်ဆေးနဲ့သန့်ရှင်းပေးလို့ရပါ တယ်။
သွားတိုက်ဆေးကို မီးပူဖင်ကို နည်းနည်းသုတ်ပေးပြီး အဝတ်ဖတ်တစ်ခုနဲ့သုတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် မီးပူကိုပြောင်လက်သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
သွားတိုက်ဆေးဟာ လက်ဝတ်ရတနာ အထူးသဖြင့် စိန်ကို ပြောင်လက် အရော င်တောက်ပလာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သွားတိုက်ဆေး အနည်း ငယ်ကို သွားတိုက်တံမှာညှစ်ထည့်ပြီး အရောင်မှိန်နေတဲ့ ရတနာပစ္စည်းကို ပွတ် တိုက်သန့်ရှင်းပေးပါ။ပြီးရင်တော့ အဝတ်စိုနဲ့ ပြောင်စင်အောင် သုတ်ပေးရမှာပါ။
ဝက်ခြံဖုတွေ ထွက်လာရင်လည်း သွားတိုက်ဆေးကို ဂျဲလ်အဖြစ် သုံးလို့ရ ပါ တယ်။ဝက်ခြံဖုကို သွားတိုက်ဆေးတို့ပေးခြင်းအားဖြင့် ဝက်ခြံဖုကို အချိန် တိုအ တွင်းပိန်သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
သွားတိုက်ဆေးမှာ ခြောက်သွေ့သွားနိုင်စွမ်းရှိကာ၊အဆီတွေကို စုပ်ယူပေးနိုင်တာကြောင့် ဝက်ခြံဖုကို ပိန်သွားစေ တာဖြစ် ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လက်သည်းတွေကိုလည်း ဖြူသွားအောင် သွားတိုက်ဆေးနဲ့ သန့်ရှင်းပေးလို့ရပါတယ်။
(၅) CD/DVDချပ်တွေက အစင်းရာတွေကို ရှင်းလင်းနိုင်
DVD အချပ်တွေမှာ ထင်နေတဲ့ အစင်းရာတွေကို သွားတိုက်ဆေးနဲ့ နူးညံ့တဲ့အဝတ်စကို သုံးပြီး ပွတ်တိုက်ရင် အစင်းတွေ လျော့သွားပါတယ်။
(၆) အဝတ်အစားက အစွန်းအထင်းများကို ဖယ်ရှားနိုင်
သွားတိုက်ဆေးက အဝတ်အစားပေါ်က နှုတ်ခမ်းနီ အစွန်းအထင်းနှင့် မင်ကဲ့သို့သော အစွန်းအထင်းများကို ဖယ်ရှားဖို့ အကောင်းဆုံး ပါဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ အစွန်းအထင်းပေါ်မှာ သွားတိုက်ဆေးကို သုတ်လိမ်းပြီး သွားတိုက်တံဖြင့် ဒါမှမဟုတ် လက်ဖြင့် ပွတ်တိုက်ပေးပါ။
ပြီးနောက် ထိုအစွန်းအထင်းနေရာကို ရေနွေးနဲ့ လျှော်သင့်ပြီး နောက်တစ်ဖန် ပြန်လျှော်ပေးပါ။
(၇) နံရံပေါ်က အစွန်းအထင်းများကို သန့်ရှင်းပေးနိုင်
သင့်တို့အိမ်က ကလေးတွေ နံရံပေါ်မှာ လျှောက်ခြစ်ထားရင်မပူပါနဲ့ ။ဒီနည်းလမ်းလေးကို အသုံးပြုကြည့်ပါ။
စိုစွတ်နေတဲ့ အဝတ်နှင့် သွားတိုက်ဆေးထည့်ပြီး နံရံပေါ်က အစွန်းအထင်းများကို ပွတ်တိုက်ပေးပါ။
ပြီးနောက် ရေနွေးဖြင့် ဆေးကြောပြီး သန့်ရှင်းတဲ့ရေအေးနဲ့ ပြန်လည် ဆေးကြောပေးပါ။
(၈) ကော်ဇော အစွန်းအထင်းများကို ဖယ်ရှားနိုင်
ကော်ဇောပေါ်က ကော်ဖီ၊ ဝိုင်၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေ အညစ်အကြေး စတဲ့ အခြားဘယ်အစွန်းအထင်းကိုမဆို ဖယ်ရှားလို့ရပါတယ်။
အစွန်းအထင်းပေါ်မှာ သွားတိုက်ဆေးကို ညှစ်ထည့်ပါ။ ပြီးနောက် အဝတ်စတစ်ခုနဲ့ အစွန်းအထင်းပေါ်ကို ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ သန့်စင်သော ရေနှင့်ဆေးကြောပါ။ ပြီးနောက် လေဖြင့် အခြောက်ခံထားပါ။
(၉) ကားရှေ့မီးသီးကို သန့်စင်တောက်ပြောင်စေနိုင်
ကားရှေ့မီးတွေ ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ ညစ်ပတ်လာရင် ဖယ်ရှားပစ်ဖို့ အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ သန့်စင်ဖို့နဲ့ တောက်ပစေဖို့ ရေနွေးဖြည့်ထားတဲ့ ပန်းကန်လုံးတစ်ခုကို ယူပါ။
ပြီးနောက် သွားတိုက်ဆေး အနည်းငယ်ထည့်ပြီး အညစ်အကြေးတွေ ဖုန်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ နူးညံ့တဲ့ အဝတ်စတစ်ခုနဲ့ ပွတ်တိုက်ပေးပါ။
ဒီနည်းလမ်းက သင့်ကားရှေ့မီးလုံးကို တောက်ပသန့်စင်စေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
(၁၀) ရေခဲသေတ္တာကိုလည်း သန့်စင်ပေးနိုင်
သွားတိုက်တံ ဒါမှမဟုတ် ရေမြုပ်ဖော့တစ်ခု ထဲကို သွားတိုက်ဆေးထည့်ပြီး ရေခဲသေတ္တာ အပြင်ဘက်ကို ပွတ်တိုက်ပေးပါ။ သင့်ရေခဲသေတ္တာ အရောင်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။
(၁၁) လက်သည်းနီ အစွန်းအထင်းများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်
သင့်ရဲ့ လက်သည်းဆိုးဆေးကို ဖယ်ရှားလိုလျှင် လက်သည်းနီဖျက်ဆေး မလိုပါဘူး။ သွားတိုက်ဆေးကို လက်သည်းပေါ်သို့ သုတ်လိမ်းပွတ်တိုက်ပေးခြင်းဖြင့် အလွယ်တကူ ပျက်စေပါတယ်။
လက်ပတ်နာရီမှန်ခွက်ပေါ်က အရစ်အကြောင်းပျောက်ချင်ရင် သွားတိုက်ဆေးနဲ့ ပွတ်တိုက်ပေးနိုင် သလို စီတီခွေမျက်နှာပြင်က အရစ်အကြောင်းတွေကိုလည်း သွားတိုက်ဆေးပွတ်ပြီး မိနစ်(၂ဝ)ကြာပွတ် တိုက်ပေးရင် အရစ်တွေပျောက်နိုင်ပါတယ်။
လက်နှိပ်ဓာတ်မီး အသုံးကြာလို့ အလင်းပြန်တဲ့ မျက်နှာပြင် ဝါသွားခဲ့ရင် သွားတိုက်ဆေး ၃~၅မိနစ်ခန့် ပွတ်ထားပြီး အဝတ်စနဲ့ သုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
မတော်တဆအပူလောင်တဲ့ ဒဏ်ရာကို သွားတိုက်ဆေးပွတ်ပေးရင် အနာ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
သွေးထွက်တဲ့ဒဏ်ရာတွေကို သွားတိုက်ဆေးနဲ့ အရင်ဆေးကြောပြီး ထပ်ပွတ်ထားပေးရင် အနာခြောက် လွယ်စေပါတယ်။
ရောင်အမ်းတဲ့ အနာတွေ အရောင်လျော့ချင်ရင် သွားတိုက်ဆေး လိမ်းထားပေးနိုင်ပါတယ်။
လကျတှအေ့သုံးခလြို့ရတဲ့ သှားတိုကျဆေးရဲ့ အံ့မခနျးအကြိုးရှိပုံနဲ့ အသုံးဝငျမှုမြား
သှားတိုကျဆေးဟာ ရှူးဖိနပျတှမှောဖွဈတတျတဲ့ ပှနျးရာ၊ပှတျမိတဲ့အရာတှေ ကို ပြောကျအောငျလုပျနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။
သှားတိုကျဆေးအနညျးငယျကို သားရေ ရှူး(leather shoes)တှမှော နညျးနညျးညှဈထညျ့ပွီး နူးညံ့တဲ့အဝတျစနဲ့ ဖိနပျကို ပှတျတိုကျပေးပါက ခွဈရာ ပှနျးရာတှပြေောကျပွီး အသဈအတိုငျးဖွဈ သှားမှာပါ။(leather shoes)တှကေိုသာမက sneaker shoes တှကေို သနျ့ရှငျးပေးနိုငျပါတယျ။
မီးပူတိုကျရငျး အဝတျနဲ့ ကပျမိလို့ မီးပူမှာ ကနျြနတေဲ့ အမညျးစှနျးတှကေိုလညျး သှားတိုကျဆေးနဲ့သနျ့ရှငျးပေးလို့ရပါ တယျ။
သှားတိုကျဆေးကို မီးပူဖငျကို နညျးနညျးသုတျပေးပွီး အဝတျဖတျတဈခုနဲ့သုတျပေးခွငျးအားဖွငျ့ မီးပူကိုပွောငျလကျသှားစမှောဖွဈပါတယျ။
သှားတိုကျဆေးဟာ လကျဝတျရတနာ အထူးသဖွငျ့ စိနျကို ပွောငျလကျ အရော ငျတောကျပလာအောငျ စှမျးဆောငျပေးနိုငျပါတယျ။
သှားတိုကျဆေး အနညျး ငယျကို သှားတိုကျတံမှာညှဈထညျ့ပွီး အရောငျမှိနျနတေဲ့ ရတနာပစ်စညျးကို ပှတျ တိုကျသနျ့ရှငျးပေးပါ။ပွီးရငျတော့ အဝတျစိုနဲ့ ပွောငျစငျအောငျ သုတျပေးရမှာပါ။
ဝကျခွံဖုတှေ ထှကျလာရငျလညျး သှားတိုကျဆေးကို ဂြဲလျအဖွဈ သုံးလို့ရ ပါ တယျ။ဝကျခွံဖုကို သှားတိုကျဆေးတို့ပေးခွငျးအားဖွငျ့ ဝကျခွံဖုကို အခြိနျ တိုအ တှငျးပိနျသှားစမှောဖွဈပါတယျ။
သှားတိုကျဆေးမှာ ခွောကျသှသှေ့ားနိုငျစှမျးရှိကာ၊အဆီတှကေို စုပျယူပေးနိုငျတာကွောငျ့ ဝကျခွံဖုကို ပိနျသှားစေ တာဖွဈ ပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ လကျသညျးတှကေိုလညျး ဖွူသှားအောငျ သှားတိုကျဆေးနဲ့ သနျ့ရှငျးပေးလို့ရပါတယျ။
(၅) CD/DVDခပျြတှကေ အစငျးရာတှကေို ရှငျးလငျးနိုငျ
DVD အခပျြတှမှော ထငျနတေဲ့ အစငျးရာတှကေို သှားတိုကျဆေးနဲ့ နူးညံ့တဲ့အဝတျစကို သုံးပွီး ပှတျတိုကျရငျ အစငျးတှေ လြော့သှားပါတယျ။
(၆) အဝတျအစားက အစှနျးအထငျးမြားကို ဖယျရှားနိုငျ
သှားတိုကျဆေးက အဝတျအစားပျေါက နှုတျခမျးနီ အစှနျးအထငျးနှငျ့ မငျကဲ့သို့သော အစှနျးအထငျးမြားကို ဖယျရှားဖို့ အကောငျးဆုံး ပါဝငျပစ်စညျးတဈခုဖွဈပါတယျ။
ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတော့ အစှနျးအထငျးပျေါမှာ သှားတိုကျဆေးကို သုတျလိမျးပွီး သှားတိုကျတံဖွငျ့ ဒါမှမဟုတျ လကျဖွငျ့ ပှတျတိုကျပေးပါ။
ပွီးနောကျ ထိုအစှနျးအထငျးနရောကို ရနှေေးနဲ့ လြှျောသငျ့ပွီး နောကျတဈဖနျ ပွနျလြှျောပေးပါ။
(၇) နံရံပျေါက အစှနျးအထငျးမြားကို သနျ့ရှငျးပေးနိုငျ
သငျ့တို့အိမျက ကလေးတှေ နံရံပျေါမှာ လြှောကျခွဈထားရငျမပူပါနဲ့ ။ဒီနညျးလမျးလေးကို အသုံးပွုကွညျ့ပါ။
စိုစှတျနတေဲ့ အဝတျနှငျ့ သှားတိုကျဆေးထညျ့ပွီး နံရံပျေါက အစှနျးအထငျးမြားကို ပှတျတိုကျပေးပါ။
ပွီးနောကျ ရနှေေးဖွငျ့ ဆေးကွောပွီး သနျ့ရှငျးတဲ့ရအေေးနဲ့ ပွနျလညျ ဆေးကွောပေးပါ။
(၈) ကျောဇော အစှနျးအထငျးမြားကို ဖယျရှားနိုငျ
ကျောဇောပျေါက ကျောဖီ၊ ဝိုငျ၊ အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျတှေ အညဈအကွေး စတဲ့ အခွားဘယျအစှနျးအထငျးကိုမဆို ဖယျရှားလို့ရပါတယျ။
အစှနျးအထငျးပျေါမှာ သှားတိုကျဆေးကို ညှဈထညျ့ပါ။ ပွီးနောကျ အဝတျစတဈခုနဲ့ အစှနျးအထငျးပျေါကို ပှတျတိုကျပေးပါ။ သနျ့စငျသော ရနှေငျ့ဆေးကွောပါ။ ပွီးနောကျ လဖွေငျ့ အခွောကျခံထားပါ။
(၉) ကားရှမေီ့းသီးကို သနျ့စငျတောကျပွောငျစနေိုငျ
ကားရှမေီ့းတှေ ဖုနျမှုနျ့တှနေဲ့ ညဈပတျလာရငျ ဖယျရှားပဈဖို့ အလှနျခကျခဲပါတယျ။ သနျ့စငျဖို့နဲ့ တောကျပစဖေို့ ရနှေေးဖွညျ့ထားတဲ့ ပနျးကနျလုံးတဈခုကို ယူပါ။
ပွီးနောကျ သှားတိုကျဆေး အနညျးငယျထညျ့ပွီး အညဈအကွေးတှေ ဖုနျတှကေို ဖယျရှားဖို့ နူးညံ့တဲ့ အဝတျစတဈခုနဲ့ ပှတျတိုကျပေးပါ။
ဒီနညျးလမျးက သငျ့ကားရှမေီ့းလုံးကို တောကျပသနျ့စငျစဖေို့ ကူညီပေးပါလိမျ့မယျ။
(၁၀) ရခေဲသတ်ေတာကိုလညျး သနျ့စငျပေးနိုငျ
သှားတိုကျတံ ဒါမှမဟုတျ ရမွေုပျဖော့တဈခု ထဲကို သှားတိုကျဆေးထညျ့ပွီး ရခေဲသတ်ေတာ အပွငျဘကျကို ပှတျတိုကျပေးပါ။ သငျ့ရခေဲသတ်ေတာ အရောငျထှကျလာပါလိမျ့မယျ။
(၁၁) လကျသညျးနီ အစှနျးအထငျးမြားကို ဖယျရှားပေးနိုငျ
သငျ့ရဲ့ လကျသညျးဆိုးဆေးကို ဖယျရှားလိုလြှငျ လကျသညျးနီဖကျြဆေး မလိုပါဘူး။ သှားတိုကျဆေးကို လကျသညျးပျေါသို့ သုတျလိမျးပှတျတိုကျပေးခွငျးဖွငျ့ အလှယျတကူ ပကျြစပေါတယျ။
လကျပတျနာရီမှနျခှကျပျေါက အရဈအကွောငျးပြောကျခငျြရငျ သှားတိုကျဆေးနဲ့ ပှတျတိုကျပေးနိုငျ သလို စီတီခှမေကျြနှာပွငျက အရဈအကွောငျးတှကေိုလညျး သှားတိုကျဆေးပှတျပွီး မိနဈ(၂ဝ)ကွာပှတျ တိုကျပေးရငျ အရဈတှပြေောကျနိုငျပါတယျ။
လကျနှိပျဓာတျမီး အသုံးကွာလို့ အလငျးပွနျတဲ့ မကျြနှာပွငျ ဝါသှားခဲ့ရငျ သှားတိုကျဆေး ၃~၅မိနဈခနျ့ ပှတျထားပွီး အဝတျစနဲ့ သုတျပေးနိုငျပါတယျ။
မတျောတဆအပူလောငျတဲ့ ဒဏျရာကို သှားတိုကျဆေးပှတျပေးရငျ အနာ သကျသာစနေိုငျပါတယျ။
သှေးထှကျတဲ့ဒဏျရာတှကေို သှားတိုကျဆေးနဲ့ အရငျဆေးကွောပွီး ထပျပှတျထားပေးရငျ အနာခွောကျ လှယျစပေါတယျ။
ရောငျအမျးတဲ့ အနာတှေ အရောငျလြော့ခငျြရငျ သှားတိုကျဆေး လိမျးထားပေးနိုငျပါတယျ။